Wararka - Faa'iidooyinka bacaha aan tollayn lahayn
Faa'iidooyinka bacaha aan tollayn lahayn
Bacaha aan la tollayn (sida caadiga ah loo yaqaan bacaha aan tolanayn) waa kuwo adag, qurux badan, neefsan kara oo dib loo isticmaali karo. Waxay yihiin wax soo saar cagaar ah.
Laga bilaabo sii deynta amarka xadka caagga ah, bacda caaga ah ayaa si tartiib tartiib ah uga bixi doonta suuqa baakadka ee maqaalka waxayna ku beddeli doontaa boorsada dukaamaysiga oo aan tollayn lahayn oo dib loo isticmaali karo. Bacaha aan suufka lahayn ayaa ka sahlan daabacaadda bacda caaga ah, muujinta midabkuna waa ka cad yahay. Sababtoo ah heerka luminta dib loo isticmaali karo wuu ka hooseeyaa bacda caaga ah, bacda aan la tollayn ayaa ka kharash badan, waxayna keentaa faa'iidooyin xayaysiis oo cad.
Bacaha wax iibsiga ee caadadu waa dhuuban yihiin waana sahlan tahay in la jebiyo si lacag loo keydiyo. Laakiin haddii aad rabto inaad xoojiso, waa inaad lacag ku bixisaa. Soo bixitaanka bacaha aan tolmada lahayn waxay xallisay dhammaan dhibaatooyinka, bacaha aan tollayn lahayn, adkaysi leh, mana fududa in la xidho. Waxa kale oo jira bacaha badan oo aan dahaarka lahayn, oo aan xoog badnayn, laakiin sidoo kale aan biyuhu lahayn, dareemaan wanaag iyo muuqaal qurux badan. In kasta oo qiimaha bacda kaliya waxoogaa ka badan tahay bacda caagga ah, nolosha bacda dukaamaysiga ee aan tollayn lahayn waxay gaadhi kartaa boqolaal ama xataa kumanaan tobanaan kun oo bac ah.
Boorso qurxoon oo aan tolmoon ahayn ma aha shandad alaab ah oo keliya. Muuqashadeeda xiisaha badan ayaa soo jiidasho leh, waxaana loo beddeli karaa boorso garabka moodada iyo fudud leh, oo noqota muuqaal qurux badan oo waddada ku yaal. Intaa waxaa dheer, sifooyinkiisa aan biyuhu lahayn iyo kuwa aan dhegdhega lahayn ayaa hubaal noqon doona xulashada koowaad ee macaamiisha inay baxaan. Boorsadaas oo kale oo aan tolmo lahayn, waxay ku daabici kartaa astaanta shirkadda ama xayaysiiska, saamaynta xayaysiintuna way caddaan doontaa. Waa run inay soo laabasho weyn tahay.
Bacaha aan suufka lahayn ayaa sidoo kale leh qiime ilaalinta deegaanka. Bixinta amarada xadka balaastigga ah waa xallinta dhibaatooyinka deegaanka. Isticmaalka soo noqnoqda ee bacaha aan tollayn ayaa si weyn hoos ugu dhigay cadaadiska beddelidda qashinka.